ဂျာမန်မြေက ဆုဖလားတွေဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အတွက်လို့ပဲဆိုကြရမှာပါ
ဖရန့်ဖတ်ကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီး ဂျာမန်စူပါဖလားကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
13 Aug 2018 . 11:57 AM
၂၀၁၈ ဂျာမန်စူပါဖလားပွဲစဉ်အဖြစ် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ ဖရန့်ဖတ်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပြီး ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းက ( ၅ – ၀ )နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ ဖရန့်ဖတ်အသင်းကို ခြေပြတ်ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ ဂျာမန်စူပါဖလားကိုနောက်ဆုံး(၃)နှစ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲခဲ့တာပါ။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းအတွက် တိုက်စစ်မှုး လီဝန်ဒေါစကီး Lewandowski က ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ဟက်ထရစ်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ လီဝန်ဒေါစကီး Lewandowski ဟာ ပွဲချိန်(၂၁ ၊၂၆ ၊၅၄)မိနစ်တွေမှာ အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ်သွင်းဂိုးတွေကိုတော့ ကိုးမန်း Coman နဲ့ သီယာဂို Thiago တို့က ပွဲချိန်(၆၃ ၊ ၈၅) မိနစ်တွေမှာသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ဂျာမန်စူပါဖလားချန်ပီယံဆုဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနည်းပြသစ် ကိုဗက် Kovac ရဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နည်းပြဘ၀ ပထမဆုံးချန်ပီယံဆုဖလားလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ ဂျာမန်စူပါဖလားမှာ(၇)ကြိမ် ဗိုလ်စွဲထားပြီး အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းအဖြစ်လည်း ရပ်တည်နေပါတယ်။
2014 Borussia Dortmund
2015 VfL Wolfsburg
2016 Bayern Munich
2017 Bayern Munich
2018 Bayern Munich
Photo: FC Bayern München Twitter
ဖရနျ့ဖတျကို ဂိုးပွတျအနိုငျယူပွီး ဂြာမနျစူပါဖလားကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈ
၂၀၁၈ ဂြာမနျစူပါဖလားပှဲစဉျအဖွဈ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးနဲ့ ဖရနျ့ဖတျအသငျးတို့ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ကွပွီး ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးက ( ၅ – ၀ )နဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးဟာ ဖရနျ့ဖတျအသငျးကို ခွပွေတျဂိုးပွတျနဲ့အနိုငျယူခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးဟာ ဂြာမနျစူပါဖလားကိုနောကျဆုံး(၃)နှဈဆကျတိုကျ ဗိုလျစှဲခဲ့တာပါ။
ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးအတှကျ တိုကျစဈမှုး လီဝနျဒေါစကီး Lewandowski က ခွစှေမျးပွကစားနိုငျခဲ့ပွီး ဟကျထရဈသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ လီဝနျဒေါစကီး Lewandowski ဟာ ပှဲခြိနျ(၂၁ ၊၂၆ ၊၅၄)မိနဈတှမှော အသငျးအတှကျ သှငျးဂိုးတှသှေငျးယူခဲ့တာပါ။ နောကျထပျသှငျးဂိုးတှကေိုတော့ ကိုးမနျး Coman နဲ့ သီယာဂို Thiago တို့က ပှဲခြိနျ(၆၃ ၊ ၈၅) မိနဈတှမှောသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၈ ဂြာမနျစူပါဖလားခနျြပီယံဆုဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးနညျးပွသဈ ကိုဗကျ Kovac ရဲ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈနညျးပွဘ၀ ပထမဆုံးခနျြပီယံဆုဖလားလညျး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးဟာ ဂြာမနျစူပါဖလားမှာ(၇)ကွိမျ ဗိုလျစှဲထားပွီး အအောငျမွငျဆုံးအသငျးအဖွဈလညျး ရပျတညျနပေါတယျ။
by Ko Kyue . 19 hours ago
by Ko Kyue . 21 hours ago